May | 2021 | HimiloNetwork
Himilo May 27, 2021	Leave a comment 165 Views
MUQDISHO (HN) — Habeen kale iyo ciriiriga waddada Jaalle Siyaad iyo Aargada Dayniile u dhaxeeya. Muddo bil ah xilliyada habeenkii waxaa ku yaraa ciriiriga iyo saxmadda xad-dhaafka ah ee gaadiidka. Laakiin bil kaddib halkan waxay kusoo laabanaysaa wejigii lagu yiqiin. La-yaabna malahan in waqtigii kaga bixi jiray shacabka inuu haddana uga baxayo. Xalay oo kale waxay ahayd habeen ciriirigu gaaray ...
Himilo May 24, 2021	Leave a comment 240 Views
MUQDISHO (HN) — Ramadaankii dhammaaday wuxuu maalmo adag u ahaa Muslimiinta Falastiin oo iyaga oo ku dhex cibaadanaysaaya gudaha Masjidka al-Aqsa tobanka dambe ee bisha lagu bilaabay dagaal iyo rabshado ka dhan ah oo lagu carqaladeynayo gudashada iyo badinta salaadaha inta lagu jiro bisha Sooqaad. Biyo kulul, gaaska sunta ah ee dadka ka ilmeysiiya iyo xoogag ku hubeysan hubka nuucyadiisa ...
Maalinta Caalamiga ah ee Xanuunka Isku-furanka.
Himilo May 24, 2021	Leave a comment 108 Views
MUQDISHO (HN) — Xanuunka Isku-furanka ama Obstetric Fistula waa mid kamid ah dhaawacyada ugu daran ee soo gaara haweeneyda waqtiga dhalmada. Dalool yar oo u dhaxaysa kaadi-heysta iyo xubinta ay ilmuhu kasoo baxaan ayaana lagu gartaa. Waana 23 May maalinta loo asteeyey si loogu baraarugo. Waxaa sababa foosha oo ku dheeraata gabadha iyo la’aanta kaalmo caafimaad oo dedgeg ah oo ...
Himilo May 22, 2021	Leave a comment 249 Views
MUQDISHO (HN) — Dunidu waxay maanta oo ah 21 May u dabaal-degaysaa Maalinta Caalamiga ah ee Shaaha. Halka badi waddamo badan sida Hindiya ay la-daala-dhacayaan xakameynta wejiga labaad ee xanuunka soo laba-kacleeyey ee Covid-19, Cabidda Shaaha wuxuu safka hore wali kaga jiraa diirsanayaasha jirka qofka siiya firfircooni iyo joogsanaan xilliyada adag ee ku abuura buuq iyo daal badan. Qarniyo badan, ...
Himilo May 19, 2021	Leave a comment 82 Views
MUQDISHO (HN) — Saxaafadda Somaaliya waxay taniyo markii Kacaanka warbaahinta uu ka curtay geyiga Somaalida ay kaalin mug leh ka qaadatay tebinta iyo baahinta wararka la xiriira dhacdooyinka maalinlaha ah sida siysaadda, amniga iyo cayaaraha. Waxaa inta badan soo raaci kara qaarkood madadaalada, fanka iyo diinta ku gaar noqda baahintooda. Laakiin, waxaa aad lama-helaan ama dhif u ah saxaafadda si ...
Himilo May 16, 2021	Leave a comment 188 Views
MUQDISHO (HN) — Daryeelka carruurta dibjirka ah aad bay diintu u bogaadisay, kumana sii jirto haddii ilmahaasu ay yihiin agoon aan rixam kaalmeeya u joogin in la kafaalo qaado. Si kastaba, Ramadaankii dhammaaday, haweeney Muslimad Nigerian ah ayaa ficilkeedu taabtay qalbiyada malaayiin dad ah kaddib markii wiil 12 jir ah oo ay ka heshay jidka ay go’aansatay inay noloshiisa bedesho ...
Himilo May 16, 2021	Leave a comment 162 Views
MUQDISHO (HN) — Sawiro aan horay looga heyn Dhagaxa Kacbada ayaa dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Barakaysan ee Makka. “Waa door iyo abyan waayo horay uma aynan arag,” ayuu yiri Afifi al-Akiti, oo arday Daraasadda Islaamka ka dhigta Jaamacadda Oxford isaga oo la hadlayay CNN. Dhagaxa madow oo sidoo kale loo yaqaan Xajarul-aswad waxaa dhadhaab laga keenay Jannada; mana ahan ...
Himilo May 12, 2021	Leave a comment 103 Views
MUQDISHO (HN) — Gudaha Suuqyada caasimadda oo aad aalaaba ku dhex arki karto waalid iyo ilmihiisa oo ka dukaamaysanaya, jaalayaasha idin muuqda waxay dhinacooda uga jiraan gorgortanka. Laaakiin, halkan uma joogaan inay carruur ay dhaleen u iibiyaan dhar iyo kabo. Waxay galbinayaan abaydin gabdho iyo wiilal isugu jira oo labadii waalid ee dhalay aanu midkood u nooleyn oo agooo iyo ...
Himilo May 11, 2021	Leave a comment 93 Views
MUQDISHO (HN) — Abdi Maxumud Aadan wuxuu subax walba usoo shaqo tagaa ka ganacsiga walxaha ay carruurtu ku ciyaarto oo ay kamid yihiin qoryaha. Waana markii uu arkay sida ubadka Somaaliyeed ay ugu go’ayaan ku ciyaarista agabyada ka sameysan hubka macmalka ah goortii uu bilaabay inuu ka ganacsado. “Wallaahi ma ujeedo doorasho aan ka ahayn inaan carruurta Somaaliyeed wax farxad ...
Himilo May 10, 2021	Leave a comment 90 Views
MUQDISHO (HN) — Ku dhawaad 30 sanno oo kasoo wareeganaysa burburkii dalka, hurgumadii laga dhaxlay waxaa looga bogsanayaa si tartiib tartiib ah. Taariikh-werinta iyo xusuusuhu waa labada raad oo umadda ay kaga foojigan tahay inaysan lumin iftiinka yar ee u baxaya. Is-beddelka nololeed ee ka jira waddanka wuxuu la imaanaya is-dhexgal iyo wada noolaansho bulsho oo dib usoo nqoneysa. Waxaa ...